အဘယ်အရာကိုပတ္တူပေါ်တွင်ရေနံပန်းချီကားကိုဝယ်ခြင်းငှါ: ထိပ်တန်း 20 ကောင်းသောဥပမာ | Oleg Soloviev အနုပညာရှင်
အတွင်းပိုင်းဖို့အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံများကို: 30 fotoprimerov
အဓိက » သတင်း » အဘယ်အရာကိုပတ္တူပေါ်တွင်ရေနံပန်းချီကားကိုဝယ်ခြင်းငှါ: ထိပ်တန်း 20 ကောင်းသောဥပမာ
ရုပ်ပုံများ, ရေနံပန်းချီကားများ, ဒါဟာရှည်လျားလူသိများခဲ့ပြီး - ဥရောပအနုပညာရှင်တွေအတွက်သူများအရောင်များကိုသုံးစွဲဖို့စတင် 15 ရာစု. ဒီမတိုင်ခင်ကအသုံးအများဆုံးကြက်ဥစိတ်ထားခဲ့သည်. ရေနံသုတ်ဆေးဿုံရောထွေး, သူတို့အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောနေကြတယ်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသဘာဝတရား၏ပုံရိပ်ကိုပေးခြင်း. ထိုကာလကတည်းကသူတို့အနုပညာရှင်များအလုပ်အတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံး tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်လာကြပါပြီ.
ရေနံသုတ်ဆေးများ၏တီထွင်မှုအတွက်သာလွန်မကြာခဏဒတျချြအနုပညာရှင်ဗန် Eyck ညီအစ်ကိုတွေနဲ့အသိအမှတ်ပြု, ဒါပေမဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်, ရှိနှင့်ပြီးသားအသုံးပြုတဲ့ရေနံ-စေးအရောင်တင်ဆီကြောင်း 8 ရာစု.
ခေတ်သစ်ကာလ၌အနုပညာရှင်တွေလည်းနည်းပညာဆိုင်ရာကွပ်မျက်ပျော်မွေ့. မှန်ကန်စွာ, လှလှပပကွပ်မျက်ခံရရေနံပန်းချီကားစိတ်ခံစားမှု၏တပြင်လုံးကိုအကွာအဝေးဖျောပွနိုငျသညျ, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဘုန်း, အားလုံး, ပန်းချီဆရာများ၏အတွေးကြောင့်. မဆိုအတွင်းပိုင်းအကျိုးရှိမည်, ကပတ္တူလျှင်.
ပတ္တူစပေါ်ရေနံပန်းချီတစ်ခုသာကြီးမြတ်ဆုလက်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်ပတ္တူပေးထားအနာဂတ်စုဆောင်းမှု၏ဖန်တီးမှုများအတွက်အခြေခံများကိုအကြပ်ကိုင်လာဖို့နိုင်ပါတယ်. သို့သော်အနုပညာစုဆောင်း - ကလွယ်ကူသောလမ်းကိုမဖွင့်. ဒီနေရာတွင်အချို့အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်.
အဆိုပါစုဆောင်း၏အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန် - ဤရွေးချယ်ထားသောအကျင့်ကိုကျင့်၏ဂုဏ်အသရေခံစားမိဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
တလမ်းတည်းဖြင့်စိတ်ခံစားမှုဟာချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာဘာလဲ? အမှန်မှာ, တိုင်းပန်းချီယင်း၏ပိုင်ရှင်ထံမှစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းကြောင်း, နှင့်ကြည့်ရှုသူ, သူ့ကိုမြင်လျှင်, သင်တို့ကိုလည်းအချို့စိတ်ခံစားမှုခံစားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, အဆိုပါပတ္တူ၏ဘာသာရပ်ကိစ္စပေါ် မူတည်.. internal အမြင် - ဒီမှာသော့ချက်, ပန်းချီဆည်းပူးရာမှကျေးဇူးတင်စကားသာစုဆောင်းနေကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်လည်းသာမန်လူမျိုးဖြစ်ကြ၏.
ပန်းချီကားများ၏ဝယ်ယူအတွက်အရေးပါသောအချက် - သူကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစျမြိုးဖွစျပါတယျ. မည်သူမဆိုထိုအနှစ်နှင့်အတူတစ်လက်ရာဝယ်ပိုပြီးစျေးကြီးဖြစ်လာ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အပိုင်းအစအဖြစ်ယင်း၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်.
ဆာဗေးဒေါ Dali ကပြောပါတယ်: "ငါမြင် - နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့နစ်မြုပ်, နှင့်ပတ္တူပေါ်တွင်ဖြီးမှတဆင့်ထင်ရှား. ဤသည်ပန်းချီ. ထိုအရာ - ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ ". ထို့ကြောင့်ရုပ်ပုံ - ဤမူရင်းနှင့်လက်ရှိလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. တောင်မှသိပ္ပံပညာရှင်များလေ့လာမှုအတော်များများကောက်ယူကြပါပြီ, ထွက်ရှာရန်, တစ်ဦးအမျိုးအစားရုပ်ပုံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုအဖြစ်. အဘယ်အရာကိုသူတို့ရှာတွေ့? positive စိတ်ခံစားမှုသဘောသဘာဝနှင့်သန့်ရှင်းသူတို့၏ရုပ်ပုံများကိုဖြစ်ပေါ်စေ. နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရာသီဥတုဖြစ်ပါသည်: နေရောင်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ် - ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို, မုန်တိုင်းနှင့်ရာသီဥတုဆိုးရွား - ကခံစားချက်များကို depressing ရဲ့.
သူငယ်ချင်းများ - gorodskoyilimorskoypeyzazh. ဆုကြေးဇူးကို, kotoryyvsegdabudetnapominatimsvoegodaritelya.
ပန်းချီကားများအားဝယ်ယူရန်အတွက်နောက်ထပ်ပေါင်း - အနုပညာ၏လယ်ပြင်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်နေတဲ့အကြောင်းရင်း. လှပသောပန်းချီ၏ပိုင်ရှင်များန်းကျင်ကမ္ဘာကြီးကိုမှာကွဲပြားခြားနားကြည့်ရှုရန်စတင်.
Chuvstvoprekrasnogo, vashvkusstanutboleetonkimi, သဲ.
ဒီတစ်ခါလည်း, nachavizuchatistoriyuzhivopisi, interesuyasetoytemoy, vysamiprobuditevsebezhelanienachattvorit.
"ငါ့ရုပ်ပုံတစ်ခုချင်းစီဘာမှမပြောသင့်, ဒီမဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့ကိုငါရေးထားလော့။ " – Vasily Vereshchagin ကပြောပါတယ်. ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားပါ, နှင့်သင့်ကမ္ဘာတွင်မီးခိုးရောင်နှင့်အချည်းနှီးဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်.